ရိုက်ထောင့်. ဂျီဩမေထြီနှင့်ဆိုင်သော အလင်းပညာ တွင် ရိုက်ထောင့
ⓘ ရိုက်ထောင့်. ဂျီဩမေထြီနှင့်ဆိုင်သော အလင်းပညာ တွင် ရိုက်ထောင့်ဆိုသည်မှာ မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်သို့ ကျရောက်သော ရိုက်လင်းတန်းတစ်ခုနှင့် ထော့မတ်ကျထောင်ထားသော မျဉ်းတို ..
ဂျီဩမေထြီနှင့်ဆိုင်သော အလင်းပညာ တွင် ရိုက်ထောင့်ဆိုသည်မှာ မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်သို့ ကျရောက်သော ရိုက်လင်းတန်းတစ်ခုနှင့် ထော့မတ်ကျထောင်ထားသော မျဉ်းတို့အကြားရှိ ထောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ထောင့်မတ်ကျထောင်ထားသော မျဉ်းကို normal ဟု ခေါ်သည်။ ရောင်ခြည်တန်းသည် အလင်း၊ အသံ၊ မိုက်ခရိုဝေ့၊ X-ray အစရှိသည့် လှိုင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အောင်ဖော်ပြပါပုံတွင် အလင်းတန်းတစ်ခုသည် အစက်ချထားသည့် normal မျဉ်းနှင့် ထောင့် θ ကို ဖြစ်စေသည်။ အလင်းတန်းသည် အတွင်းပိုင်းဘက်သို့ လုံးဝ အလင်းပြန်ပါက ထိုရိုက်ထောင့်ကို Critical Angle ဟု ခေါ်သည်။ ပြန်ထောင့် နှင့် ယိုင်ထောင့် တို့သည် ရောင်ခြည်တန်း နှင့်ဆိုင်သည့် ထောင့်များ ဖြစ်ကြသည်။